Hlola iJapan - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eJapan.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseJapan
Bukela ividiyo ekhuluma ngeJapan
IJapan eyaziwa njengeNihon noma iNippon ngesiJapan, yisizwe esiqhingini saseMpumalanga Asia. Hlola iJapan, tyena 'Izwe LeLanga eliKhuphukayo' izwe lapho okwedlule kuhlangana khona nekusasa. Isiko laseJapan selula emuva iminyaka eyikhulu, nokho belishesha ukwamukela futhi lidale amafashini nezitayela zakamuva zakamuva.
IJapan kuvame ukuba nzima ukuyiqonda kulabo abafundile entshonalanga. Kungabonakala kugcwele ukuphikisana. Izinhlangano eziningi zaseJapan zibusa izimboni zazo. Amadolobha angobuchwepheshe besimanje futhi obuphezulu njenganoma iyiphi enye indawo, kepha imijondolo yamapulangwe eyakhiwe isengabonakala eduze kwama-condominiums wangaphambi kwengilazi. IJapan inethempeli elihle nezingadi ezivame ukuzungezwa yizimpawu zobumba nezakhiwo ezimbi. Indawo yokudlela esolwa kakhulu ezweni, ebiza amakhulu amadola ngokudla kwakusihlwa, isitolo esincane esisesiteshini esingaphansi komhlaba esihlala abantu abangaphansi kweshumi nambili. Maphakathi nezikibha zesimanje uzothola iminyango eyenziwe ngokhuni eholela kumagumbi endabuko anama-tatami mats, izikrini ze-shoji, ne-calligraphy, efanelekile emikhosini yetiye yendabuko. Lawa ma-juxtapositions angabonakala njengodidayo noma oxhaxha kulawo asetshenziselwa uhlobo olufana kakhulu lwamadolobha aseYurophu naseNyakatho Melika, kepha uma uyeka, futhi wamukela ubuciko bezinwele obumisiwe, uzothola izindawo ezithokozisayo nezimangazayo ezweni lonke.
Izwe laseJapan livame ukubonwa eNtshonalanga njengezwe elihlanganisa isiko nobunjalo besimanje, futhi izakhiwo nezindlela eziningi zendabuko ziyagcinwa, kepha izakhiwo nezindlela zanamuhla nakanjani zibusa isipiliyoni sakho eJapan. IJapan kwakuyizwe lokuqala le-Asia ukuzimela ngokuzimela, futhi izwe liyaqhubeka nokwamukela ubuchwepheshe obusha kanye ne-aesthetics, kepha ngokungafani emazweni amaningi, iJapan ayizizwa isidingo esithile sokuhlasela noma ukususa ubuchwepheshe obudala, izinhlaka, noma imikhuba. Izinto ezintsha zibekwa nje eceleni kwezinto ezindala. Lokho akusho ukuthi iJapan yamukela ukugcinwa okukhulu kwezakhiwo zomlando noma ukuthi abantu bavame ukwenza imicikilisho yendabuko, kodwa abantu ngokuvamile bakholelwa ukuthi uma inani elincane labantu lifuna ukuqhubeka lisiko noma lilondoloze isakhiwo elilelabo, kufanele babe kuvunyelwe ukwenza lokho. Ngale ndlela, ukuthuthuka kwenzeka kakhulu ngendlela yokuhlobisa, isakhiwo esisodwa ngasikhathi, kunokuba kube ngamaphrojekthi amakhulu wokuphinda wakhe kabusha. Amabhulokhi amaningi asemadolobheni avela ukuze aqoqe inqwaba yezakhiwo ezincanyana ezithatha iminyaka engamashumi amahlanu noma ngaphezulu yomlando wokuqanjwa. Izitayela zezingubo ziphenduka ezindleleni eziyishumi ngasikhathi sinye kunokuba zisebenze ngobunye besitayela semfashini. Umuntu owamukela i-subculture ethile kanye nemfashini yayo ingahle ihambisane nokuhlukahluka kwezindlela ezahlukene lapho usebenza noma ekhaya, kepha kunombango omncane wokungaboni ngaso linye phakathi kwalezi ndima.
Indawo iJapan eziqhingini ezingasemaphethelweni angaphandle kwe-Asia ibe nomthelela omkhulu emlandweni wayo. Vele ngokwanele ukufika ezweni lase-Asia, nokho okwanele ukulihlukanisa, umlando omningi waseJapan ubonile izikhathi zokuvalwa nokuvuleleka.
Umlando orekhodiwe waseJapan uqala ngekhulu le-5th, yize ubufakazi bemivubukulo bokuhlala buthathe iminyaka ye-50,000 kanye noMbusi oyi-mythical Jimmu kuthiwa wasungula umugqa wamanje we-Imperial ngekhulu le-7th BCE. Ubufakazi bemivubukulo, kodwa-ke, bukwazile ukulandelela umugqa we-Imperial babuyela esikhathini se-Kofun ngesikhathi se-3rd kuya kwi-7th century CE, futhi lapho abaseJapan okokuqala babexhumana kakhulu neChina neKorea. IJapan yabe isiya ngokuya yaba yisizinda phakathi kweNkathi ye-Asuka, lapho iJapan yathatha kabanzi izici eziningi zesiko lamaChina, yabona kwethulwa iMahayana Buddhism neConfucianism.
AmaJapan aziwa kakhulu ngobuntu bawo. AmaJapan amaningi ajabule kakhulu ngokuba nezivakashi eziya emazweni awo futhi asiza kakhulu abantu bokufika ababukeka belahlazekile. Abantu abasebasha baseJapan bavame ukuba nentshisekelo enkulu yokuhlangana futhi babe ngabangane nabakwamanye amazwe. Ungamangali uma umuntu waseJapan (imvamisa wobulili obuhlukile) eza kuwe endaweni yomphakathi futhi ezama ukuqalisa ukukhuluma nawe ngesiNgisi esihambisanayo. Ngakolunye uhlangothi, eziningi azisetshenziswanga ukusebenzelana nabezinye izizwe (gaikokujin) futhi zigcinwa futhi zinqikaza ukuxhumana.
Ngokujwayelekile izivakashi zakwamanye amazwe zihlala ziyindawo evamile ezingxenyeni eziningi zeJapan ngaphandle kwamadolobha amakhulu nezindawo zokubuka ezithandwayo, futhi ungahlangana nezikhathi lapho ukungena esitolo kubangela ukuba abasebenzi bethuke. Ungakuthathi lokhu njengobuhlanga noma okunye ukucwaswa kwabantu: besaba nje ukuthi uzozama ukubakhuluma ngesiNgisi futhi bazojabha ngoba abakwazi ukuqonda noma ukuphendula. Ukumamatheka kanye noKonnichiwa (“Sawubona”) kuvame ukusiza.
IJapan inezinkulungwane zamadolobha nezindawo eziya kuzo. Nje ukubiza abambalwa Tokyo, I-Yokohama, Kyoto, Hiroshima, Osaka futhi Sapporo lezi ezinye ezithakazelisa kakhulu kumhambi.
Ukuze amadolobha amaningi Japan.
Bona I-3 ephezulu yaseJapan ezinye izinto ezibukwayo nezindawo ezihlonishwa kakhulu amaJapane uqobo
Uma useseJapan, kufanele uphathe ipasipoti yakho (noma iKhadi Lokuhlala, uma kusebenza) nawe ngaso sonke isikhathi. Uma ubanjwa ngesheke okungahleliwe ngaphandle kwalo (nokuhlasela kwe-nightclub akujwayelekile), uzoboshwa kuze kube yilapho othile ekutholela wena. Abaonile bokuqala abaxolisayo bavame ukuyekiswa ngesexwayiso, kepha ngokusobala ungahlawuliswa.
IJapan ingesinye sezindlela ezinhle kakhulu zokuhamba emhlabeni, kanti ukuhambahamba ngokuvamile kuvunguza kamnandi, lapho isitimela sithandwa kakhulu ezindaweni eziningi. Yize ukuhambahamba eJapan kubiza kakhulu, kunezindlela eziningi zokuhambela izivakashi zakwamanye amazwe ezingenza ukuhamba kube okungabizi kakhulu.
Inethiwekhi enhle kakhulu yaseJapan i-Shinkansen isho ukuthi ukuhamba ngendiza kuvame kakhulu uma kunesidingo. Lokhu kushiwo, ukundiza kuhlala kuyindlela esebenzayo kakhulu yokufika eziqhingini ezingaphandle kweJapan, ikakhulukazi ukuxhuma kusuka ezweni kuya eHokkaido, Okinawa, nokuya eKyushu kuye naseTokyo. Ukundiza kusiza futhi ekuzungezeni iHokkaido enabantu abambalwa, njengoba inethiwekhi yeShinkansen lapho igcina ngokuphelela eHakodate.
Ukululeka ngempumelelo akukho e-Japan, futhi ukuzama ukunikela ngamathiphu kungahle kubonwe njengokuthukwa. Insizakalo yaseJapan iyimbali, futhi awudingi ukufumbathisa abalindi / abalindi ukuze benze umsebenzi wabo
Kufanele uzame okwakhona cuisine waseJapan
Ukugeza eJapan kuyinkinga enkulu
Okokugqoka kwansuku zonke njengabavakashi, usuvele ususimweni esijabulisayo: noma ngabe ugqoka kanjani, uzovelela eceleni kwezixuku zabesilisa abahola amasudi nezitshudeni zebanga umfaniswano. Futhi ukulandela imfashini yaseJapan eshintsha ngokushesha kungumsebenzi omningi kakhulu wezivakashi.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu: gqoka izicathulo ongazishonisa kalula, ngoba kungenzeka ukuthi wenza lokhu kaningana ngosuku. Izicucu ze-Athletic zamukeleka ngokuphelele; mane ubophelele ngentambo okhiye kakhulu ukuze ukwazi ukungena nokuphuma kubo ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho.
Musa ukudonsa uzungeze idolobha ngesikhwama esikhulu njengohlobo oluthile lwe-camper yasemadolobheni; uzophuma kabi kakhulu (ozobe wenza, noma kunjalo, ngoba ungeyena owamaJapane), isikhwama sakho sangemuva uzongena ngendlela yawo wonke umuntu (kufaka neyakho), futhi kukungalingani nje. Izimbotshana ezincane kufanele zidluliselwe ngaphambili kwakho lapho uthenga ezitolo noma ezitimeleni eziningi.
Abesifazane abasebancane baseJapan bavame ukugqoka ngendlela engabhekwa njengevusa inkanuko yobulili ngamazinga aseNtshonalanga, ngisho naphakathi nesikhathi sasemini. Le ndlela yokugqoka ayilindelekile kwabesifazane bakwamanye amazwe kepha ayinakutholakala kunoma yiluphi uhlangothi, ngakho-ke ukugqoka lokho umuntu akhululekile kakhulu kufanele kwanele. Uxwayiswe nokho ukuthi ukwenama okucacisiwe cishe akubonakali eJapan futhi kungaheha amehlo amaningi anhlanhlathayo, futhi namahlombe angenalutho ahlonitshwa.
Kwebhizinisi, amasudi aseyindlela ejwayelekile ezinkampanini eziningi ngaphandle kokuthi wazi ngenye indlela. Hlela ukugqoka isudi yakho kusihlwa ngeziphuzo nokuzijabulisa.
Yize wonke umuntu egeza enqunu emithonjeni eshisayo, esebhishi noma echibini, usadinga isudi yokugeza yohlobo oluthile. Izibhuku zokubhukuda noma izikhindi zamabhodi amadoda zihamba kahle, kepha ama-Speedos azovela. Uma uzobe usebenzisa echibini, uzodingeka ukuthi ube ne-cap cap yokubhukuda.
Yize amadolobha aminyene nezakhiwo ezindala zinezithiyo eziningi zalabo abaphila nokukhubazeka nezinye izindaba zokuhamba, iJapan yizwe elifinyeleleka kakhulu ngesihlalo esinamasondo. IJapan isishintshele kwigiya eliphezulu ukudala umphakathi "ongenazithiyo".
Iningi leziteshi zezitimela nezitimela ezingaphansi kwezitimela likhona elingena ngesihlalo esinamasondo. Lapho umuntu edinga usizo olukhethekile, njengomsebenzisi ohamba ngesihlalo esinamasondo, bangazisa abasebenzi esiteshini emasangweni amathikithi futhi bayoqondiswa esitimeleni futhi basizwe ukwehla esitimeleni lapho beya khona noma olunye uhambo lokuya maphakathi nohambo.
Ukuheha okukhulu kwabavakashi kuguqulwa ngaphakathi kwesizathu futhi kuvame ukuhlinzeka ngohlobo oluthile lwendlela efinyelelekayo. Ngenkathi izaphulelo zitholakala kulabo abakhubazekile, ukuheha izivakashi kungenzeka kungemukeli amakhadi wokuhlonza abakhubazekile angakakhishwa eJapan.
Amahhotela anamagumbi afinyelelekayo kungaba nzima ukuwathola futhi ajwayele ukubiza ngegama elithi “igumbi lamahhala” noma “igumbi lomhlaba wonke” esikhundleni segama elithi “kufinyeleleke”. Ngaphezu kwalokho, noma igumbi litholakala, amahhotela amaningi adinga ukubhuka ngocingo noma nge-imeyili.
Kunama-ATM amaningi, kepha ambalwa amabhange aseJapan amukela amakhadi aphesheya. Amahhovisi eposi, izitolo ezilula ze-7-Eleven, futhi manje inani elikhulayo lezitolo ezilula lingathatha amakhadi we-ATM aphesheya. Ezikhungweni ezinkulu zedolobha elikhulu, i-Shinsei Bank, kanye nama-ATM e-Citi ahlala atholakala futhi avumela ukuhoxiswa okuncane njenge-¥ 2000. Konke kukuvumela ukuthi usebenzise imenyu yesiNgisi.
Amakhadi wesikweletu aphesheya amukelwa kakhulu emahhotela amakhulu, ezitolo zamaketanga, nasezindaweni ezisebenzisana nezivakashi eziningi zakwamanye amazwe. Kodwa-ke, ezinye izitolo zaseJapan kungenzeka zingakwazi ukuzamukela. Kuyalulekwa ukuthi kugcinwe imali eyanele yezimo eziphuthumayo ngaso sonke isikhathi.
Iningi uma kungewona wonke amaJapane aqonda kakhulu ngomuntu wakwelinye izwe (i-gaijin noma i-gaikokujin) ongahambelani namasiko abo manjalo; amaJapan ayathanda ukuqhosha (ngokukhohlisa), ukuthi izilimi zawo namasiko aphakathi kwezinto ezinzima ukuyiqonda emhlabeni, ngakho-ke ajabule kakhulu ukukusiza uma ubonakala uthwele. Kodwa-ke, amaJapan azokwazisa uma ulandela okungenani le mithetho elandelayo, eminingi yayo ehla ngokuya ezimeni zenhlalo zenhlanzeko eqinile futhi ugweme ukugxila kwabanye (meiwaku).
Lapho uhlola Hlonipha eJapan.
Izikhumbuzo ZobuBuddha endaweni yeHoryu-ji
Izikhumbuzo Zomlando Zasendulo Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities)
Ama-villages omlando waseShirakawa-go naseGokayama
ISikhumbuzo se-Hiroshima Peace (Genbaku Dome)
Izikhumbuzo Zomlando Zasendulo Nara
Imibukiso kanye namathempeli kaNikko
Izindawo Zasebusuku Nezindawo Ezihlobene Nazo zoMbuso waseRyukyu
Izindawo ezingcwele kanye nemizila yohambo kuKi Mountain Range
Iwami Ginzan Imayini Yesiliva kanye Nendawo Yayo Yamasiko
I-Hiraizumi - Amathempeli, Izingadi kanye Nezindawo Zemivubukulo Emelela Umhlaba Ongahlanzekile weBuddhist
I-Fujisan, indawo engcwele nomthombo wokuphefumlelwa kobuciko
AmaTomioka Silk Mill namaSayithi ahlobene
Izindawo ezinguMeyiiji Industrial Revolution yase-Japan: I-iron ne-iron, ukwakha nokwakha amalahle
Umsebenzi Wezokwakha weLe Corbusier, Umnikelo Ovelele Enyakazeni Lanamuhla *
I-Sacred Island yase-Okinoshima namaSayithi aHlanganisiwe esifundeni saseMunakata
Izindawo ezifihliwe zamaKhristu esiFundeni saseNagasaki
Iqembu leMozu-Furuichi Kofun: Izindimbane Ezimbelwe zeJapan yasendulo